Dalxiiska M&A wuxuu qaataa $ 7.52 bn rubucii hore
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Dalxiiska M&A wuxuu qaataa $ 7.52 bn rubucii hore
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Investments • News • Dadka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Faafka ma joojin doono heshiisyada Isku biiritaanka iyo La Wareegidda. Heshiisyada noocan oo kale ah ayaa laga yaabaa inay xitaa sii ahaadaan kuwo muhiim ah xilliyada adag, $ 7.52 bilyan rubucii horena waa markhaati.
La wareegitaanka Caesars Entertainment ee $ 3.69bn ee William Hill
Hantida $ 2.16bn ee CAR ee Indigo GlamourLimited
La wareegida $ 850m ee AccorHotels ee SBE Entertainment Group
Helitaanka $ 228.28m ee CAR ee Indigo GlamourLimited
La wareegitaanka MultiChoice Group ee BetKing $ 115.36m.
Wadarta dalxiiska & dalxiisyada warshadaha xuduudaha iskutallaabta ah iyo Qaadashada (M&A) ee qiimahoodu yahay $ 7.52bn ayaa lagu dhawaaqay adduunka oo dhan Q4 2020, oo ay hogaamineyso helitaanka $ 3.69bn ee shirkadda Caesars Entertainment ee William Hill, sida lagu sheegay keydka heshiisyada GlobalData.
Qiimaha ayaa calaamadeeyay koror 315.5% ah rubucii hore iyo kor u kac 225.5% ah marka la barbardhigo celcelis ahaan afartii rubuc ee ugu dambeysay, oo istaagay $ 2.31bn.
Isbarbardhigga qiimaha heshiisyada M&A ee xudduudaha gobollada kala duwan ee adduunka, Yurub waxay qabatay booska ugu sarreeya, iyadoo wadarta heshiisyada lagu dhawaaqay muddada u dhiganta $ 3.9bn. Heerka waddanka, Boqortooyada Ingiriiska ayaa ugu sarreysa liiska marka la eego qiimaha heshiiska ee $ 3.73bn.
Marka la eego mugga, Yurub ayaa u soo baxday gobolka ugu sarreeya dalxiiska & dalxiiska xilliyada soohdimaha M&A ee adduunka oo dhan, oo ay ku xigto Aasiya-Baasifigga ka dibna Waqooyiga Ameerika.
Wadanka ugu sareeya xagga howlaha ka gudbinta xuduudaha M&A ee Q4 2020 wuxuu ahaa Boqortooyada Midowday oo leh shan heshiis, waxaa ku xigay Shiinaha oo afar leh iyo Jarmalka oo leh seddex.
Sannadka 2020, dhammaadka Q4 2020, heshiisyada M&A ee xadka ka gudbaya oo qiimahoodu yahay $ 12.73bn ayaa looga dhawaaqay adduunka dalxiiska iyo dalxiiska, taas oo muujinaysa hoos u dhac 37.03% sanadkiiba.
Isdhaafsiga Xuduudaha M&A ee dalxiiska & warshadaha xilliga firaaqada Q4 2020: Heshiisyada ugu sarreeya
Shanta ugu sarreysa ee xuduudaha M&A ee ku saabsan dalxiiska iyo dalxiisyada firaaqada ayaa lagu qiyaasay 93.6% qiimaha guud intii lagu jiray Q4 2020.
Isku darka qiimaha heshiisyada sare wuxuu istaagay $ 7.04bn, marka loo eego qiimaha guud ee $ 7.52bn ee la diiwaangaliyay rubuca.
Shanta dalxiis ee ugu sareysa dalxiiska & dalxiisyada dalxiisyada dalxiiska & heshiisyada firaaqada ee Q4 2020 ee ay dabagashay GlobalData waxay ahaayeen:
Falanqeyntani waxay tixgelineysaa oo keliya heshiisyada la shaaciyey iyo kuwa la dhammaystiray ee ka soo baxa GlobalData database-ka maaliyadeed iyo ka reebista dhammaan heshiisyada la joojiyay iyo kuwa xanta ah. Dalka iyo warshadaha waxaa lagu qeexaa iyadoo loo eegayo xarunta dhexe iyo warshadaha ugu badan ee shirkadda bartilmaameedka ah. Ereyga 'helitaan' waxaa loola jeedaa heshiisyo dhameystiran iyo kuwa ku jira marxaladda tartanka.
GlobalData waxay la socotaa xogta waqtiga-dhabta ah ee ku saabsan dhammaan isku-biiritaanka iyo soo-iibsiga, hantida gaarka loo leeyahay / raasamaalka gaarka ah iyo waxqabadka macaamil ganacsi ee adduunka oo dhan laga helo kumanaan ka mid ah websaydhada shirkadda iyo ilo kale oo lagu kalsoon yahay.